अब का’ठमाडौँ उपत्य’कामा १५ दिन’को लागि ‘सटडाउन’ गरिँदै….
August 7, 2020 595
उपत्यकामा कोरो’ना भाइरसको जोखिम ब’ढ्दै गएपछि दुई हप्ताको लागि ‘सटडाउन’ हुने भएको छ । मानवीय गतिविधि र आवतजा’वतमा थप कडाइ हुने भक्तपुरकी सिडिओ हुमक’ला पाण्डेले जानकारी दिइन् ।
तर तत्काल लक’डाउन भने नहुने उन’को भनाइ छ । कोरोना भाइरस’को महामारी फैलि’इरहेका बेला आइत’बारदेखि लागू हुनेगरी उपत्यकामा ‘सटडाउन’ को निर्णय गरिएको सिडि’ओ पाण्डेले बताइन् ।
शुक्रबार उपत्य’काका तीन जिल्ला’का प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उद्योग वाणिज्य संघ र सुरक्षा नि’कायका प्रमुखसहि’तको बैठक बसेको थियो । यस अवधिमा सं’क्रमण बढी देखिएको क्षेत्रलाई भने सिल गर्ने निर्णय भएको पाण्डेले बताइन्­ ।
सिडिओ पाण्डेले ‘सटडाउन’ अवधि’भरमा जि’ल्ला प्रशासन कार्यलयबाट हुने केही विषेश काम’बाहेकका सेवा बन्द हुने बताइन् । अन्य सर’कारी कार्याल’यको हकमा कार्या’लय प्रमुखले नि’र्णय गर्ने तय गरेको पाण्डेले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘बैठकमा मास्क र स्यानिटाइ’जरको प्रयोग नगर्ने तथा सुरक्षा सावधा’नी नअपनाउनेलाई क’डा कारबाही गर्ने तथा सवारी साधनमा लागू गरिए’को जोरबिजोर प्रणाली’लाई कडाईका साथ पा’लना गराउने पनि निर्णय भएको छ ।’ – रातोपाटी बाट
Prevचीनको उहान सर्वेक्षणको भया’वह नतिजा: कोरोना’मुक्त भएका ९० प्रतिशतमा देखियो यस्तो स’मस्या
Nextआज कुन जिल्लामा कति जना संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस्
घरबाट भागेर काठमाडौं छिरेकी मोडेल अञ्जली अधिकारीको यस्तो छ संघर्षको कथा
भारत छिर्न लाग्दा सांसद सरिता गिरीलाई नाका बाटै फर्काइयो…